ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရုပ်ပုံများ: Bu ၏တစ်ဦးကဓာတ်ပုံလှည့်လည်
by ကေတီဒိုနှင့် Marisa ဗင်္ယာမိန်
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်နှင့် Kenmore ရင်ပြင်မှာ
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းပရဝုဏ်အပေါ် Kenmore ရင်ပြင်ထဲမှာ Citgo သင်္ကေတပြ။ rusty Clark က - ထို Air ကို MF 8 တွင် am-noon / Flickr ကို
ဧရာ illuminated Citgo နိမိတ်လက္ခဏာကိုချားလ်စ်မြစ်တလျှောက်မိုင်မြင်နိုင်သည်ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တည်နေရာ, လက်လွတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာ Bu ရဲ့ကျောင်းဝင်း၏အရှေ့ပိုင်းအစွန်အပေါ် Kenmore ရင်ပြင်အထက်ထင်ပေါ်။
Kenmore Square ကိုဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းစာအုပ်များအဖြစ် Bu အဝတ်အစားရောင်းချသည့် Bu ရဲ့ Barnes & Noble စာအုပ်ဆိုင်, Kenmore ရင်ပြင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိသည်။ အဆိုပါစာအုပ်ဆိုင်အတွက် Starbucks ကအရှေ့ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲမှာကျောင်းသားတွေအတွက်တစ်ဦးလူကြိုက်များလေ့လာမှုအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Myles Standish ခန်းမ, ကြီးမားတဲ့အဆောင်, Kenmore ရင်ပြင်၌တရားဖြစ်ပါတယ်။ Shelton ခန်းမနောက်ထပ်ကြီးမားသောနေထိုင်ရာ, နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးဆောင်နှစ်ဦးစလုံးသွားမယ့်ရေတိုလမ်းလျှောက်ကြသည်။ Bu ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦ, အ Bu ကျောင်းသားစင်တာကိုလည်းအနီးကပ်အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Kenmore ရင်ပြင်က Fenway Park ကအားဖြင့်မှန်သည်အဖြစ်, ကျောင်းသားများအကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များဦးတည်ရာသည်အဖြစ်အလွယ်တကူအရှေ့ကျောင်းပရဝုဏ်နှင့်တောင်ကျောင်းပရဝုဏ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျောင်းသားလက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်းစားသောက်ဆိုင်များ, ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်တစ်တက်ကြွရွေးချယ်ရေး။
ဤဓာတ်ပုံခရီးစဉ်အတွက် Bu ကျောင်းဝင်းအနှံ့အနောက်ဘက်မှအရှေ့ဘက်ကနေခရီးသွားလာနှင့်ကျောင်းဝင်းပျေါလှငျအများအပြားရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
Bu ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ, အ Bu ကျောင်းသားစင်တာန်ဆောင်မှုများ, အပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်စင်တာနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများအကြံပေးတစ်ဦးခြောက်ဇာတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအိုးအိမ်တစ်နှစ်ထပ်ထမင်းစားခန်းခန်းမဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ကျဆုံးခြင်း 2012 ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူအဆောက်အဦးအရှေ့ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားများအတွက်တစ်လူမှုရေးအချက်အချာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အရေးကြီးသောပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို-invigorates ပြန်လည်အသစ်တစ်ခုအိမ်မှာပေးပါသည်။ 100 ကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, အ Bu ကျောင်းသားရေးစင်တာ Kenmore ရင်ပြင်အနီးမှန်သည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီး။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
ချားလ်စ်မြစ်နှင့်ဓနသဟာယ Ave အကြားအလတ်စားဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီး, မျိုးစုံဆောင်နှင့်ဦးစီးဌာနအဆောက်အဦးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်အိမ်ရာများအများစုဟာငါးဆယ်ကျောင်းသားများကိုအထိအမျိုးမျိုးကြောင့်သေးငယ်အိမ်ရာများဖြစ်သော brownstones ဖြစ်ကြသည်။ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အထူးအသိုင်းအဝိုင်းအိမ်ရာများအတော်များများဟာဥပမာ - အဘို့, တရုတ်အိမ်, အဂန္တဝင်အိမ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအိမ် - ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ် brownstones ဟာတော်တော်လေးသစ်ပင်-စီတန်းလမ်းကြောင့် upperclassmen နှင့်ဆွဲဆောင်မှုဗိသုကာများကအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
Shelton ခန်းမနှင့် The Towers နှစ်ခုပိုကြီးဆောင်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်အပေါ်ထမင်းစားခန်းခန်းမနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ အင်ျဂလိဌာန, နိုင်ငံရေးပါတီများသိပ္ပံဌာနနှင့်သမိုင်းဦးစီးဌာနမှဖွင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်ပေါ်မှာတည်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတချို့ရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါ Hillel အိမ်, ကက်သလစ်ရေးစင်တာနှင့်အဆင့်လက်ခံရေးအဆောက်အဦးအပါအဝင်အခြားဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်, လည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းကိုတိုင်းပြည်အတွက်အရှည်ဆုံး-running ကောလိပ်ဆပ်ပြာအော်ပရာသော BUTV ပြပွဲ "ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်," ၏ namesake ဖြစ်ပါတယ်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် Castle ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအဆိုပါ Bu Castle, Bu ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မူလကအဆိုပါရဲတိုက် 1967 သည်အထိထိုအခါ မှစ. 1939 ခုနှစ် Bu လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်ဘော်စတွန်စီးပွားရေးသမားဝီလျံ Lindsey ကပိုင်ဆိုင်သည်ရဲတိုက် Bu ရဲ့သမ္မတသျော။
ယနေ့ Castle ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကြိုဆိုဧည့်သို့မဟုတ်ညီလာခံအဖြစ်အထူးဖြစ်ရပ်များ, ထွက်ငှားသည်။ ရဲတိုက်၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာ Bu အရက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 21 သို့မဟုတ်ကျော်နေသောကျောင်းသားများကိုအရက်အချိုရည်ကမ်းလှမ်းကြောင်းတည်းသောဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှပြေးတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရက်ဆိုင်ကကမ်းလှမ်းတစ်ဦးကပေါ်ပြူလာစိန်ခေါ်မှုကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ကျောင်းသားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏သင်တန်းကျော်ဘီယာ၏ 50 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုမသောက်ရကြမည်ဖြစ်သောထဲမှာ "Knight ဟာရှာပုံတော်" ဖြစ်ပါတယ်။
Related အပိုဒ်: 10 Amazing ကောလိပ် Castle
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းမှာအားလုံးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဒီဂရီဝင်ငွေနေစဉ်, ကျောင်းထိုကဲ့သို့သောစာရင်းကိုင်, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများနှင့်ဥပဒေအဖြစ်တစ်ဆယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအတွက်ပြင်းအားပေးထားပါတယ်။ SMG ၏အမာခံများကျောင်းသားများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စစ်ဆင်ရေးအတွက်သင်တန်းများယူထားတဲ့အတွက် Cross-Functional Core ပရိုဂရမျ, သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဖြစ်ပြီး, နောက်ဆုံးမှာသစ်တစ်ခုထုတ်ကုန်များအတွက်ထူးခြားသောစီးပွားရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်အသင်းများကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအဆောက်အဦး၏ကျောင်းများ၏ဧည့်ခန်းကဒီမှာပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦကိုလည်း Pardee စီမံခန့်ခွဲမှုစာကြည့်တိုက်, studious အလုပ်အတွက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ setting ကိုစံပြတစ်ဦး Starbucks ကကော်ဖီဆိုင်, State-Of-The-Art စာသင်ခန်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဘို့အမျိုးစုံ soundproof ခန်းပါဝင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး၏ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
ဆက်သွယ်ရေး၏ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကောလိပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် & ရုပ်မြင်သံကြား, သတင်းစာပညာ, Mass Communication, Advertising ကြော်ငြာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များပေးထားပါတယ်။ ကချစ်စနိုးဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် "COM," 2000 ကျော်ကြောငျးသား။ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်-managed ရေဒီယိုဘူတာရုံ, WTBU ၏နေအိမ်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံ, BUTV, COM ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုတည်ဆောက်ရန်အဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ 1947 ခုနှစ်တွင်ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းက COM အန်ဒီ Cohen ကိုဘီလ် O'Reilly နှင့် Howard Stern ပာအပါအဝင်ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ကွပ်မျက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှ Warren မျှော်စင်
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် Warren Towers ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Warren မျှော်စင် Bu ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်အဓိက underclassmen အိပ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး, များသောအားဖြင့် freshman ကျောင်းသားများကိုရတာဟာ။ တချို့ဆိုရင် single နှင့် quad ရှိပါတယ်ပေမယ့် Warren အတွင်းအများစုကအခန်းပေါင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
Warren ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ College မှဖြတ်ပြီးတည်ရှိသောနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ကောလိပ်အားဖြင့်မှန်သည်ကသူတို့အတန်းနီးစပ်သူဖြစ်လိုသူ freshman ကျောင်းသားများကိုများအတွက်စံပြနေထိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 1800 ကျောင်းသားများအကိုင်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ, Warren Towers တိုင်းပြည်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံး Non-စစ်ရေးအိပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျှော်စင်လေးဇာတ်လမ်းအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူအသက် 18 ပုံပြင်များတစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိပါတယ်။ Warren မျှော်စင်အနီးအနားကျောင်းပရဝုဏ် Convenience, မြေအောက်ရထားနှင့်အရှေ့ကျောင်းပရဝုဏ်ကျောင်းသားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များလေ့လာမှုအစက်အပြောက်သော Starbucks ကအတူတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဝေမျှပေးသည်။
အဆိုပါအိမ်ရာများအပြင်, Warren မျှော်စင်လေ့လာမှုခန်းအမျိုးမျိုး, ဂီတအခန်းတစ်ခန်းတစ်ဂိမ်းအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတော်ကြာရေချိုးခန်းခန်းရှိပါတယ်။ သုံးယောက်တာဝါတိုင်အကြားမျှဝေ Warren လေးအတွက်အသင့်တော်ခန်းမ, ကျောင်းဝင်းအပေါ်အကြီးဆုံးထမင်းစားခန်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ Bu ရဲ့ကောလိပ်
ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ Bu ကောလိပ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
1873 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်လက်ရှိစာရင်းသွင်းဘွဲ့ကြို 7000 ကျော်နှင့် 2000 ဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှအကြီးဆုံးကောလိပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကောလိပ်ပေါင်း 60 ကျော်ကဗိုလ်ကြီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွရရှိပြီး 2500 သင်တန်းများပေးထားပါတယ်။
CAS ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသော Tsai စွမ်းဆောင်ရည်စင်တာ, အရှိဆုံး Bu ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြဇာတ်, ပို့ချချက်များနှင့်ကွန်ဖရဘို့အဓိကနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Coit စောင့်ကြည့် CAS ၏ခေါင်မိုးပေါ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ တိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဥ့်သည်စောင့်ကြည့်လေ့လာအများပြည်သူ, ရာသီဥတုခွင့်ပြုမှဖွင့်လှစ်သည်။ ထို့အပြင်ဘူမိဗေဒဌာနတို့ကကြီးကြပ်ဖန်လုံအိမ်ဥယျာဉ်, CAS ၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်ကလပ်အဓိကအားဖန်လုံအိမ်ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းဖွင့်လှစ်သည်။
Bu ပို့ချချက်ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်အတွင်းဤသည်စာသင်ခန်း 100 ခန့်ကျောင်းသားများကိုထိုင်လျက်, တက္ကသိုလ်အတွင်းအများဆုံးဟောပြောပွဲခန်းမများ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစာသင်ခန်းနေရာများထဲကတစ်ခု, ပို့ချချက်များနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များအတွက်အသုံးပြုမယ့်ပြဇာတ်ရုံ-စတိုင်အဆောက်အဦဖြစ်သောစပျစ်နွယ်ပင်ဖုံး Morse ကဇာတ်ရုံထဲမှာဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်များကနေလမ်းဆင်း။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ဟောပြောပွဲခန်းမများ၏အများစုကြီးမားသောနိဒါန်းအတန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှပျမ်းမျှလူတန်းစားအရွယ်အစားဤမျှလောက်များစွာသောသင်တန်းများသေးငယ်စာသင်ခန်းထဲမှာနေရာတစ်နေရာယူ, 28 ကျောင်းသားများကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏တခုလုံးကိုဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် 481 စာသင်ခန်းများနှင့် 2000 ကျော်ဓါတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှနားမှာပလာဇာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
နားမှာပလာဇာကျောင်းဝင်း၏ပထဝီစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဓမ္မ၏ကျောင်းနှင့်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်နှင့်နားမှာ Chapel, ဝတ်ပြုရာတက္ကသိုလ်ရဲ့အရာရှိတဦးကရာအရပျနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်၎င်း၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ရပ်တည်။ အဆိုပါပလာဇာအတွင်းအဆိုပါ "နောက်ဆုံးမှာအခမဲ့" ပန်းပုဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောသူမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာထံအပ်နှံသည်။ ကျောင်းဝင်းအပေါ်တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာဒဏ္ဍာရီရုပ်ထုမှလာမယ့်တံဆိပ်ခတ်ပေါ်လိုက်ပြီးသူကိုမဆိုကျောင်းသားလေးနှစ်အတွက်ဘွဲ့ရမည်မဟုတ်ကြောင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
နားမှာပလာဇာတိုက်ရိုက်ဓနသဟာယရိပ်သာကိုဆင်းပြေးသော "T က" ၏ Bu ဗဟိုမှတ်တိုင်ကနေဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် နားမှာပလာဇာကဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကောလိပ်များအားလုံးကိုအနီးကပ်နီးကပ်၌တည်ရှိ၏, အထူးသဖြင့်သောကွောငျ့, အထူးသဖြင့်နေသာရက်, ကျောင်းသားများအကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များကျိန်းဝပ်ပွဲချင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Bu မှာ Mugar သတိရအောက်မေ့စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Mugar သတိရအောက်မေ့စာကြည့်တိုက်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများအတွက်အဓိကစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးထပ်နှင့်အတူ Mugar ထို 4th အပေါ်တိတ်ဆိတ်အခန်းကျနဲ့ 5th ကြမ်းပြင်ရန်, အုပ်စုတစ်စုအလုပျအတှကျအကြီးဖွင့်သော PAL Lounge ဟာကနေမတူညီတဲ့လေ့လာမှုနေရာများအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင် Mugar တည်ရှိသောအဆိုပါ Howard Gotleib Archive သုတေသနစင်တာ, နိုင်ငံရေး, စာပေ, အမျိုးသားရေးရေးရာ, အရပ်ဘက်အခွင့်အရေး, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, နှင့်သတင်းစာပညာ၏နယ်ပယ်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီကနေသမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမှတ်ရာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပါရှိသည်။ တတိယအထပ်တွင် Bu ရဲ့အကျော်ကြားဆုံး alumnus အားဖြင့်အလုပ်အချို့ကိုပါရှိသည်သောမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာစာဖတ်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်သဲသောင်ပြင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Bu သဲသောင်ပြင်တစ်ဦးရိုးရာကောလိပ်လေထုနှင့်အတူကျောင်းသို့ Bu အသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် 1971 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Bu သဲသောင်ပြင်အားလုံးမှာ "ကမ်းခြေ" မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ပန်းခြံနားမှာပလာဇာနောက်ကွယ်မှစိမျးလနျးဧရိယာအများစုတက်စေသည်။ ယင်း၏အမည်ပြောင်၏ဇစ်မြစ်, "ကမ်းခြေ" နေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ Storrow Drive ကို, ချားလ်စ်မြစ်တစ်လျှောက်လမ်းမကြီး, အ Bu သဲသောင်ပြင်မှအပြိုင်ပြေးနှင့်များစွာသောကျောင်းသားများအသင်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်လျှင်, ကားများလှိုင်းတံပိုးကဲ့သို့မြည်ဆိုကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စဇာစ်မြစ်တစ်ခုကိုကျောင်းသားများကို Frisbee ကစားခြင်း, sunbathing, ဒါမှမဟုတ်ပူပြင်းနေသာရက်တစ်မောအိပ်ခံစားခြင်း, Bu သဲသောင်ပြင်စစ်မှန်သော "ကမ်းခြေ" Vibe ပေးခြင်းကြည့်ဖို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဂျော့ခ်ျ Sherman ပြည်ထောင်စု။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
အဆိုပါဂျော့ခ်ျ Sherman ပြည်ထောင်စု Bu ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံများအတွက်စင်တာ, ကွန်မြူနတီဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုနှင့် Howard Thurman Center ကအဆိုပါ GSU ၏မြေအောက်ခန်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Howard Thurman စင်တာမတူကွဲပြားမှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားအတူအားလုံးလူများအတွက်တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုစင်တာတစ်ခုသင်ယူမှုစင်တာနှင့်လူမှုရေးအာကာသနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာအစ Bu မှာကလူအမျိုးမျိုးတို့အကြားဘုံမြေပြင်ထွန်းလင်းတောက်ပစေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုယဉ်ကျေးမှု Shock လို့ခေါ်တဲ့ဘလော့ဂ်ပြေး။
Panda Express ကိုချားလ်စ်မြစ်ပေါင်မုန်ကုမ္ပဏီ, Starbucks ကနှင့် Jamba ဖျော်ရည်အားလုံးအစားအစာမှကု သ. မရသောအရာပထမဦးဆုံးအထပ်ရဲ့အစားအသောက်တရားရုံးအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ရရှိအနည်းငယ် options များဖြစ်ကြသည်သက်သတ်လွတ်စားပါဝင်သည်။ အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ် Convenience Store, ရံဖန်ရံခါကျောင်းဝင်းန်းကျင်နေရာများနှင့်အတူ, Starbucks ကထဲကနေဖြတ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ဦးအမြန်ရေစာများအတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။
Metcalf ခန်းမ, Bu အကြီးမားဆုံးခနျး, ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ Young ကအဆိုပါဧရာမနှင့် Chiddy ဘန်ကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်တွေ Bu ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကျဆုံးခြင်းဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်နေရာမှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Freshman orientation ကိုနွေရာသီကာလအတွင်း Metcalf အတွက်ရာအရပ်ကိုကြာနှင့်နယူးအင်္ဂလန်တွင်အကြီးဆုံးအင်္ဂါ Metcalf ခန်းမတွင်တည်ရှိသည်။
Bu ကြံခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေစင်တာတွင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
2005 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ကြံခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေစင်တာတွင်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အဓိကအားကစားစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး Bu ကျောင်းသားများကို FitRec အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ရှိသည်။
နှစ်ခုရေကူးကန်များ, တစ်ဦးပျင်းရိမြစ်တစ်ရော့ခ်-တောင်တက်မြို့ရိုး, တစ်ဦးမိုးလုံလေလုံပြေးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးကျောင်းသားများကို FitRec ရဲ့ 18000 စတုရန်းမိုင်ထွက်အလုပ်လုပ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ခြေဘဝါး State-Of-အနုပညာအလေးချိန်နှင့် cardio ခန်းကိုပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ။ Bu ရဲ့ကခုန်စတူဒီယိုထဲကအတော်များများအဖြစ်ကောင်းစွာ FitRec တွင်တည်ရှိပါသည်။ Intramural အားကစားအသင်းများကိုအပန်းဖြေဂိမ်း FitRec ရဲ့တရားရုံးများကိုအသုံးပြုပါ။
Agganis Arena ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီဒို
ကဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွေ, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ဟော်ကီဂိမ်းများအတွက်စံပြနေရာအောင် 7000 ပရိသတ်ကျော် Agganis Arena ထိုင်ခုံ။ အဆိုပါနယ်ပယ်ဟာ Red Sox ဘို့ဘေ့စ်ဘောကစားရန်ပေါ်မသွားမီဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှကြယ်ပွင့်ဘောလုံးကစားသမားခဲ့တဲ့ alumnus ဟယ်ရီ Agganis ပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနယ်ပယ်တွင်သူကိုယခုနည်းပြအဆိုပါဟော်ကီအသင်းတစ်ခုကျောင်းသားဟောင်းများပြီးနောက်အမည်ရှိဂျက်က Parker ကိတ်ကွင်း, ရတာဟာ။
Agganis Arena အဆိုပါဆရာယောဟနျ Hancock ဟာကျောင်းသားကျေးရွာဆောင်နီးစပ်သူဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်သည်, ကြံခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေစင်တာနှင့် Nickerson ဖျော်ဖြေမှုအတွက်တည်ရှိသည်။
အဆိုပါဌာနခွဲငါဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် Terriers အရှိဆုံးအားကစားများအတွက်အမေရိကအရှေ့ညီလာခံအတွင်းယှဉ်ပြိုင်။
Bu မှာ Hancock ဟာကျောင်းသားကျေးရွာ
Bu မှာ Hancock ဟာကျောင်းသားကျေးရွာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Hancock ဟာကျောင်းသားကျေးရွာ, သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများ, "StuVi" တိုက်ရိုက် Nickerson Field မှဖြတ်ပြီးအနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ခေါ်အဖြစ်။ StuVi နှစ်ခုသီးခြားအိပ်ဆောင်, StuVi ငါနှင့် StuVi II ကိုပါဝင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံး StuVi အိပ်ဆောင်အလွန်အမင်းကျောင်းသားများအကြားနှင့်ရလဒ်, များသောအားဖြင့်အိမ်သူအိမ်သား upperclassmen အဖြစ် coveted နေကြသည်။ Stuvi II ကိုများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးကကျောင်းဝင်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် nicest အိပ်ဆောင်အောင်, 2009 ခုနှစ်တွင်ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ StuVi ငါ၏ကြမ်းပြင်အဆင့်တွင် Buick ကားလမ်း Market က, StuVi နေထိုင်သူများအဘို့အသေးငယ်တဲ့ကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ FitRec, တက္ကသိုလ်အားကစားရုံများနှင့် Agganis Arena လည်းအဆိုပါ Hancock ဟာကျောင်းသားကျေးရွာတည်ရှိသည်။
ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်အနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Bu ရဲ့အနောက်ကျောင်းပရဝုဏ် Claflin ခန်းမ, အိပ်ပျော်ခန်းမနှင့် Rich ခန်းမ, များသောအားဖြင့် freshman ကျောင်းသားများကိုအမျိုးမျိုးကြောင့်သုံးအိပ်ဆောင်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nickerson ဖျော်ဖြေမှု, Agganis Arena နှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်အားကစားစင်တာတွင်အပါအဝင် Bu ရဲ့အားကစားအဆောက်အဦ၏အများစုမှ၎င်း၏အနီးကပ်နီးကပ်၏, အားကစားသမားများအကြားမှာလည်းရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါလတ်ဆတ်တဲ့အစားအသောက်ကုမ္ပဏီအနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲမှာထမင်းစားခန်းခန်းမ, Claflin နှင့်အိပ်ပျော်ခန်းမချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံး On-ကျောင်းဝင်းထမင်းစားခန်း options များထဲကတစ်ခုဖြစ်စဉ်းစားသည်။
အထွေထွေလေ့လာရေး၏ကောလိပ်, Fine Arts ၏ကောလိပ်နှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ကျောင်းအပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦး၏တစ်ဦးကနံပါတ်, အနောက်ကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းတည်ရှိသည်။
Bu များအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT ဇယား
: ကိုလည်းသင်ဘော်စတွန်ဧရိယာ၌အချို့သောအခြားလူကြိုက်များကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် Babson ကောလိပ် , ဘော်စတွန်ကောလိပ် , Brandeis တက္ကသိုလ် , အီမာဆန်ကောလိပ် , ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် , MIT က , အဘိဓါန် Northeastern တက္ကသိုလ် , Simmons ကောလိပ် , Wellesley ကောလိပ် , ပိုဘော်စတွန်ဧရိယာကောလိပ်များ
မဟာဖားအောက်အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ဓာတု & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ
ပတ္တမြား Net က :: SSH ကိုက The SSH ကို (Secure Shell) ပရိုတိုကော
Dolch အမြင့်ကြိမ်နှုန်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို Cloze လှုပ်ရှားမှုများ
Aimer အကြောင်းအားလုံး - ပြင်သစ်ကြိယာ
9 Quotes '' တစ်ဦး Mockingbird Kill ရန် '' မမေ့နိုငျဖှယျ
နေ့၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို - kitai
Juz '' 22 ကုရ်အာန်၏
Grammar အတွက်အသုံးပြု Cranberry Morpheme
အဆိုပါနာမည်ကြီး Kommune ၏ထကျ 1
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်လူစားထိုးဆိုတာဘာလဲ
Baltimore ရဲ့ Fort McHenry